HAMRAKHABAR | » अहिलेको सन्दर्भमा भारतको नेपाल प्रति भित्री मिसन यस्तो छ ….. अहिलेको सन्दर्भमा भारतको नेपाल प्रति भित्री मिसन यस्तो छ ….. – HAMRAKHABAR
अहिलेको सन्दर्भमा भारतको नेपाल प्रति भित्री मिसन यस्तो छ …..
दश वर्ष यता एमालेले कमाएका ग्लामरस फेसहरुलाई तितरबितर पारिदिने । दुई-चार जना पछिल्लो समय ओलीतिर फर्केर जान इच्छुक योगेश भट्टराईहरुको पनि कुनै हैसियत त्यहाँ रहनेवाला छैन । तिनले दिएको मानो खाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ‘खाए खा नभए घिच’ भनेजस्तो स्थिति हुन्छ । यो भनेको सेकेण्ड ब्रेक भयो ।आम मान्छेले देख्दाखेरि काँग्रेस र मधेसीको वीचमा राम्रो एलाएन्स हुनुपर्ने । अझ उपेन्द्र यादवभन्दा पनि महन्थ ठाकुरसङ्ग काँग्रेसको बढी मिलजुल हुनुपर्ने । उनका निम्ति काँग्रेसले चुनावी क्षेत्र खाली गरिदिएको पनि हो ।
जोडबलले समझदारी गर्‍यो गर्‍यो अन्तिम राती गएर कुरा बिगृयो । त्यसैकारण मधेसको हितमा राजेन्द्र,महन्थ र काँग्रेस मिलेर जान हुन्छ भन्ने रिपोर्ट भारतले पाएन । उनीहरुले सोचे- केन्द्रदेखि तलसम्म तालमेलका लागि ओली सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । किन ? यसको दुईटा कारण छ ।एउटा हो,जहाँ ओलीको मान्छे छ,घृणाको राजनीतिका कारणले त्यहाँबाट मधेसी भोट ओलीलाई खासै आउँदैन । मधेसी नेताले देऊ कि देऊ भनेपनि आउँदैन । ओलीलाई कमजोर पार्नको लागि योभन्दा ठूलो हतियार अरु के चाहियो ? जबकि मधेशीलाई ओलीको पक्का भोट डोकोको डोकै जान्छ ।
ओलीको भोट लिने,आफ्नो मधेसी सेन्टिमेन्टको भोट पनि लिने भएपछि को जित्छ ? हेट पोलिटिक्सको कारण मधेसीको भोट ओलीलाई राम्ररी गएन भने ओली यत्तिकै कमजोर हुन्छ ।बाहिर मान्छेले देख्दा छक्क पर्दै महन्थ र ओली कसरी मिलेको होला भन्छन् तर वास्तविकता यही हो र बुझेरै इण्डियाले अन्तिमसम्म यिनको गठबन्धन टिकाएको हो । त्यसमाथि महन्थजीकै मान्छेहरु प्रायः सबै लोभी छन् । उनीहरुलाई पैसा पाए,मन्त्री पाए पुग्यो । भारतको अर्को खास एजेण्डा आजको मितिमा भन्नुपर्दा संविधान नै फालिदिने हो ।
चाइनिजले ब्ल्यांकेट लेभलमा यो काम गर्नै सकेन । उसको लगानी जति छ त्यो व्यक्तिकहाँ छ । देखिन्छ,लेफ्टिस्टहरुको घर ठडिएको । अब त परिस्थिति बदलियो । कोर्टले के गर्छ थाहा छैन ।मोदीजी नेतृत्वको भारतलाई आफूजस्तै बिरोधीप्रति असहिष्णु स्वभावको जंगबहादुर नै चाहिएको हो । राम्रो विचार भएको मनमोहन न भारतलाई पच्यो न त किसुनजी न ठीक जँच्यो । गिरिजाप्रसादलाई लठैत भनि भनी बदनाम गरे तर उनी लठैत त होइनन् । उनले आफ्नो समयमा गरेको डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरु हेरौँ न । चारजना वामपन्थीले उनै गिरिजालाई फासफुस पारेर सूर्यनाथ उपाध्यायलाई अख्तियारको हाकिम बनाएको हो नि ! गिरिजाबाबुलाई यो मान्छेले भोलि आफ्नै टाउकोमा लात हान्छ भन्ने थाहा नभएको होर !जनआस्था बाट साभार